Eeboow adaa awood leh, mudane Bashiir Axmed Makhtal oo nool iyo Meles Zenaawi oo mootan cibraa kusugan! By: Xaaji M/rashiid. | ogaden24
Eeboow adaa awood leh, mudane Bashiir Axmed Makhtal oo nool iyo Meles Zenaawi oo mootan cibraa kusugan! By: Xaaji M/rashiid.
Apr 24, 2018 - Aragtiyood
Inaan baraarujiyo jirintaanka Allaha awoodda badan ee Dunida maamula dhowr jeer oo hore ayaan xusay.. Xaqiiqatan markaad ufiirsato dhacdooyinka iyo isbadalada Aduunka kasocda wax wayn ayaa iimaanka kusoo kordhaya. Doorkan qoraalka aan farta ku hayo waa mid kooban waxaana ugu wacan farxadda jasadkayga saaqday ee ku aadan soo daynta mudane Bashiir Axmed Makhtal oo si dulmi ah uqu qabirraa jeel kamid ah jeelasha guumaystaha ee dadka lagu ciqaabo. Waxaan si kal iyo laab ah uleeyahay mudane kusoo dhawoow hawada nadiifta ah ee caalamka, kusoo dhawoow magaaladaadii iyo dadkaagii oo aad ugu xiiso qaba aragtidaada iyo hadalkaaga.
Qoyska mudane Bashiir waxaan u dirayaa weedhii ugu qaalisaneyd oo ah Aayad Qur’aanka kariimka ah kamid ah taasoo ah انمايوفى الصابرون اجرهم بغيرحساب Waxaanu u dhamaystiri kuwa samra ajarkooda isagoo xisaab la’aan ah. Runtii waa ballanqaad wayn oo qofka iimaanka leh uu ku hiran karo. Teeda kale Nabi yuusuf calayhi salaam ayaa lasheegay inu xabsi gardarra ah kujiray ilaa 7sano, taasoo ina tusaysa in dad inaga fadli badan ay xabsi soo galeen.
Mudane Bashiir iyo Marwadiisa Aziza ee adkaysiga badan magarayo wax intaa ka qaalisan oon hawada umarin karo, balse haday kafursan waydo waxaan leeyahay waa aduunyo iyo xaalkeed waxa idin qabsaday, waxayna soomaalidu tidhaahaa hal dhinaceed qalanyahay ma fayooba waa hadaana qaldin xikmadda. Waxaa si dulmi ah jeelasha Itoobiya iyo Ogadenya uga buuxa mudanayaal iyo marwooyin tiro belay oo ubaahan ducadeena iyo dadaalkeenaba. Waxaan Ilaahay Cazza Wajalla waydiinsanayaa inuu iyagana faraj dedeg ah ufidiyo-Aamiin.
Waxaa gumaysi meel uu joogaba caado u ah inuu taarged gareeyo qoyasaka bulshada indhaha u ah ee usha usida isagoo filaya haduu kuwaa ka guulaysto inuu ka guulaystay dhamaan umaddii kale. Garaad Makhtal Rabi ha unaxariistee ayaa isaguna soo maray xabsiyada foosha xun ee guumaysiga sabankii Xayle salaase siday taariikhda lagu hayo, inta uu guumayste jirana arintaasi way sii socondoontaa.
Sidaad la wada socotaan Bashiir waxaa Oodda afka kasaaray Meles Zanaawi balse waxaa maanta taagan xaalad tii kaduwan oo ah inuu Males mootanyahay oo uu ciidda kudarsamay shan sano kahor, meesha uu noolyahay Bashiir dhulkana uu raadeynayo. Kala wareejinta awoodaa leh ilaahay baa iska leh ee aynu kuwada xamdino.
Ugu dambayn waxaan Qoyska ilaahay uga baryayaa inuu u barakeeyo cimrigooda inta ka hadhay isla markaana uu ku irsaaqo awlaad saalix ah sidoo kalana Qalbiyadooda ka maydho dhibkii soo gaadhay.Aamiin.